November 2014 - iftineducation.com
iftineducation.com – Daawo gabdho somaliland oo sharafta ka dhacday Wadooyinka NEWYORK, USA RIIX HALKAAN KA DAAWO MUUQAAKA ADAA YAABI DOONEE
DAAWO VIDEO : GABAR SOMALI MEEL CIDLA AH LAGU KUFSADAY VIDEO NA LAGA DUUBAY
iftineducation.com – DAAWO VIDEO : GABAR SOMALI MEEL CIDLA AH LAGU KUFSADAY VIDEO NA LAGA DUUBAY RIIX HALKAAN KA DAAWO MUUQAALKA
Daawo Video:-Layaab Gabdho iyo Wiilal Soomaaliyeed Oo Soo Bandhigay Filim Sex(Wasmo) Ah 2014
iftineducation.com – Daawo Video:-Layaab Gabdho iyo Wiilal Soomaaliyeed Oo Soo Bandhigay Filim Sex(Wasmo) Ah 2014 RIIX HALKAAN KA DAAWO MUUQAALKA
Daawo VIDEO:- Madaxweynihii hore ee Masar Xusni Mubaarak Dambi Lagu Waayay
iftineducation.com – Maxkamad ku taala dalka Qaahira ayaa wax dambi ah ku weeysey madaxweynihii hopre ee dalka Masar Xusni Mubaarak kaasi oo in muddo ah ay maxkamad ku socotey, taasi oo ku saabsanayn dil loo geystey dad banaanbaxyo dhigayay sanadkii 2011-kii ka hor inta aanan xilka looga tuurin kacdoon shacab. Mubaarak iyo labadiisa wiil ayaa sidoo kale waxa ay maxkamadda sheegtey…
Deg deg: M/weynaha oo sheegay in la isku dhafi doono ciidamada gobolada
iftineducation.com – Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in isku dhafka ciidanka gobollada iyo kuwa Qaranka ay qeyb ka qaadaneyso dhisidda awoodda ciidanka iyo horumarinta federaalka dalka. War-qoraal ah oo ka soo baxay xafiiska madaxweynaha ayaa looga hadlay mustaqbalka Soomaaliya iyo sida loo mideyn karo cududda ciidamada ka jira maamul goboleedyada iyo ciidanka Qaranka Soomaaliyeed. War-saxaafadeedka ayaa lagu xusay in…
iftineducation.com – Shirkadda xawaaladdaa ee Dahabshiil ayaa markii u horeysey furtey Baanka Ganacsiga ee Dahabshiil, kaas oo xaruntiisu tahay bartamaha magaalada Hargeysa. Waxaana xafladdii furtaanka xariga ka jarey madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo. Dhismaha Baanka Ganacsiga ee Dahabshiil ayaa ah mid aad u bilicsan, kana kooban 7 dabaq, loona dhisey qaab casri ah. Cabdirashiid Siciid Duacaale ayaa sheegey in dhismaha…
iftineducation.com – Oday waayeel 65 sano jir u dhashay dalka Kenya ayaa weerar ku qaaday gabar yar oo da’deedu tahay 10 jir, xili uu damcay inuu kufsado, hase ahaatee gabadhaasi ayaa soo gaaray dhaawacyo culus, waxaana lagu dabiibayaa xarun caafimaad oo ku taal magaalada Nyeri ee dalka Kenya. 65 jirkan ayaa gabadha kusoo weeraray Baangad, si uu u fara xumeeyo, hase…
iftineducation.com – Kullamo u dhaxeeyay Madaxweynaha Somalia Xasan Sheekh iyo xildhibaanadii kasoo horjeeday mooshinka laga soo gudbiyay Ra’iisul Wasaaraha ee buuqa ka dhex dhaliyay fadhiyadii baarlamaanka ayaa la isku afgartay in si sharciga waafaqsan loo horkeeno mooshinka maalinta beri oo ku beegan Axad, kadibna xildhibaanada si nabad ah loogu qeybiyo si kulamada danbe ay ugu doodaan, kadibna la geliyo cod u…
Fanaanad Maraykan Caan ah Oo hees la soo qaadey Fanaan Soomaali ah -Daawo
iftineducation.com – Fanaanka Reer Koonfur Afrika Axmed Kaffi Ak ayaa soo saaray Muuqaalkii ugu shidnaa sanadahan markii ay la soo jishay hees uu qaaday gabadh Maraykanka laga jecelyahay. Fanaan AK ayaa heestan waxa uu ku soo jiitay Half Milyan Qof Oo soomaali ah markii qaab ciyaareedka heestaasi uu ku bixiyay waqti badan. Gabadha Madowga ah ee heesta la soo qaaday ayaa…
Kuweyt oo xarun casri ah agoonta ugu dhistay Hargeysa: Sawirro
iftineducation.com – Madaxweynaha maamulka Somaliland Axmed Siilaanyo ayaa maanta xariga ka jaray mashruucii ugu horeeyay ee noociisa ah oo laga hirgeliyo magaalada Hargeysa, taasoo Dowladda Kuweyt ku taageertay Caruurta Agoonta ah. Mashruucaan oo ah mid ballaaran ayaa wuxuu ka kooban yahay dhismooyin qurux badan oo la casriyeeyay, lehna qeybo kala duwan oo loogu talagalay inay caruurta agoonta wax ku bartaan, garoomo…